HitBTC | 2019 ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် တွင်ကုန်သွယ်ရေးဘယ်လို Read HitBTC ပလက်ဖောင်း - က ISO
ဆန်းသစ်သောအင်္ဂါရပ်များ STANDOUT ။
ထရေးဒင်း Tools များ။
ကုန်သည်များအပေါ်ရုပ်သိမ်းပေးရန်နှင့်သိုက်ရန်ပုံငွေများနိုင်ပါတယ် HitBTC အောက်ပါလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ပလက်ဖောင်း:
ယင်းအပေါ်ထရေးဒင်း HitBTC ပလက်ဖောင်း။
အပိုဆု Affiliate Program ကို။
HitBTC အသုံးပြုသူသည်၎င်း၏အပြန်အလှန် interface ပေါ်မှာဖန်တီးမှု features တွေကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့် tradable ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစတင်မည်ချန်နယ်တစ်ခုပေးကာအပြန်အလှန်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 2013 အတွက်ဗြိတိန်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့။ အဆိုပါဘက်စုံပလက်ဖောင်းတိုကင်များနှင့်ကနဦးအကြွေစေ့ဟာယပူဇော်သက္ကာအပါအဝင် 150 ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကျော်၏ကုန်သွယ်ရေးထောက်ခံပါတယ်။
"Highly အကြံပြု HitBTC"
အလည်အပတ် HitBTC ယခု
ပလက်ဖောင်းဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များနှင့် software developer များအကြားတစ်ဦးမိတ်ဖက်၏ရလဒ်အဖြစ်တီထွင်ပေးခဲ့သည်။
ဒါဟာပူးပေါင်းလူတိုင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အစည်းအဝေးနိုင်စွမ်းအနေနဲ့အဆင့်မြင့်ပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ အဆိုပါစမတ်ပလက်ဖောင်းဆန်းသစ် features တွေအဖြစ်ပွင့်နေချိန်မြင့်မားရရှိနိုင်မှုနှင့်အမှားသည်းခံပါတယ်။ ပိုများသောကြောင့်, ပလက်ဖောင်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ် updates တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်နှင့်အဆက်မပြတ်ပိုပြီးအသုံးပြုသူ-friendly ဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်။
•အဆင့်မြင့် fix API ကိုနှင့် API စနစ်များကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေ။ အဆိုပါ API ကိုစနစ်များကိုသင်တဦးတည်းပိုင်ဆိုင်လျှင်သင်တစ်ဦးကုန်သွယ် bot သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဖော်ရွေစက်ရုပ်နေကြသည်။ သူတို့ကအနိမ့်အောင်းနေချိန် data နဲ့သေဒဏ်စီရင် feeds တွေကိုရှိသည်။
• Web ကိုလိုက်ဖက်မှု။
သင် web ပေါ်မှာသူကရယူတခါပလက်ဖောင်းတစ်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဆိုင်းအပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ interface ကိုတွင်, ရုံမှတ်ပုံတင် option ကို click နှိပ်ပြီးလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်စွက်။ သင်တို့ကိုလည်းလုံခြုံတဲ့စကားဝှက်ကိုထူထောင်ကူညီပေးပါမည်ဖြစ်သောမှန်ကန်သော email address ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့အကောင့်ကို Verify ။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ပဲ!
ကွဲပြား features တွေနှင့်အတူအများအပြားအကောင့်အမျိုးအစားတွေကိုပူဇော်ကြသည်, ဒါကြောင့်သင်ကောင်းစွာကိုက်ညီကြောင်းအကောင့်တစ်ခုရွေးချယ်ဖို့ကထို option ရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကွဲပြားခြားနားသောအကောင့်တစ်ခုစီကိုအကောင့်အမျိုးအစားမှပူးတွဲပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခွအေနမြေားကို အသုံးပြု. ပိုင်ဆိုင်မှုကို select နှင့်ကုန်သွယ်မှုမှကုန်သည်များကို enable ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စတိုင်မှသင့်အကောင့်ကိုက်ညီဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
HitBTC ကကျယ်ပြန့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမမီရှိပါတယ်အဖြစ်အများအပြားနိုင်ငံတွေဆီကနေအများကြီးကုန်သည်များကဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အချို့နိုင်ငံများတွင်ကြောင့်စည်းမျဉ်းတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုသို့မဟုတ်ထိုသူတို့အပေါ်ချမှတ်ထားဘဏ္ဍာရေးကန့်သတ်ရန်အတွက်ပလက်ဖောင်းပေါ်ကုန်သွယ်မှုမရပါဘူး။
တစ်ဦးကမှတ်သားလောက်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဥပဒေရေးရာအတားအဆီးမှအမေရိကန်ဆန့်ကျင်သည်။ အခြားနိုင်ငံများမှအီရန်, လက်ဘနွန်, လစ်ဗျား, လိုင်ဘေးရီးယားနှင့်ဆီးရီးယားတို့ပါဝင်သည်။
HitBTC ကုန်သွယ် options နဲ့ tools များ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံပေးထားပါတယ်။ သိကောင်းစရာများပလက်ဖောင်းများ၏အပြန်အလှန် interface ပေါ်မှာအများဆုံးအရောင်းအများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ တချို့ကဖလှယ်မှုမှသာသင်အများကြီးသတင်းအချက်အလက်မပါဘဲအရောင်းအထွက်သယ်ဆောင်ပါစေပါလိမ့်မယ်။
HitBTC ကုန်သွယ်, သို့သော်, သငျသညျကုန်သွယ်မတိုင်မီထွက်တွက်ဆရန်လိုအပ်မည်သောသတင်းအချက်အလက်အများကြီးကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ မသေချာအရင်ကဆိုရင်သည့်ကုန်သွယ်အကြံပေးချက်များနှင့်ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပိုမိုကျေးဇူးတင်ကြလိမ့်မည်နေစဉ်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များ platform ပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောဂရပ်များနှင့်ဇယားတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။
သင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူးလျှင်ပင်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဘလော့ဂ်သတင်းအချက်အလက်ကိုသင်ပဲ့ပြင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ထက်ပိုပါတယ်။ သငျသညျထို့နောက် platform ပေါ်တွင်မဆိုစွဲချက်ရှိပါတယ်, မမေးနိုငျသလဲ
အတူအထွေထွေအကောင့် Creating HitBTC သငျသညျမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမကန့်သတ်နှင့်အတူစတင်ရန်နိုင်အောင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စေ cryptocurrencies ၏န့်အသတ်သိုက်အဘို့အဘယ်သူမျှမဝန်ဆောင်ခသို့မဟုတ်စွဲချက်လည်းရှိပါတယ်ဟုပြောသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ် EUR အတွက် Fiat ငွေကြေး၏သိုက်အပြင်ပလက်ဖောင်းကထောက်ခံကြသည်။ ဤရွေ့ကားသိုက်, မတူပဲ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးငွေကြေးနှင့်သိုက်၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်. တစ်တာဝန်ခံအဖြစ်သူတို့အပျေါမှာအခကြေးငွေကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
execution အခကြေးငွေပင်နိမ့် Non-ချက်ချင်းအရောင်းအနှင့်အတူ 0.1 ချက်ချင်းအရောင်းအပေါ်% နှင့်သကဲ့သို့အနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတစ် 0.01% ကိုပြန်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ Cryptocurrency ဆုတ်ခွာအလားတူလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာငွေကြေးသော်လည်းကွန်ယက်ကိုအခကြေးငွေကောက်ခံနိုင်သည်။ Fiat ငွေကြေးဆုတ်ခွာငွေကြေးနှင့်ငွေပမာဏကိုအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ကောက်ခံပါမည်။
ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များအလွန်ထူးခြားတဲ့နှင့်အတော်လေးလွယ်ကူဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ချိန်ခွင်အဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်အချိန်ကိုလျော့နည်းသည်။ သိုက်, သင်ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာ generate ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သိုက်ခလုတ်ကိုသင်ဤလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ က interface ပေါ်မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့သငျရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ရရှိနိုင်သောငွေကြေးရွေးချယ်မှုစာရင်းတစ်ခုသင်ကသင်နှစ်သက်သော option ကိုရွေးချယ်သင့်ရာကနေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အက္ခရာများ, နံပါတ်များနှင့် QR ကုဒ်ကိုတစ်ဦး string ကိုအတူပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာပေးသောထို option အပေါ်ရန်ပုံငွေကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင့်အကောင့်ထဲမှာရှိသမျှပိုင်ဆိုင်မှုပိုမိုမြန်ဆန်အရောင်းအများအတွက်ထူးခြားသောလိပ်စာကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အပိုဆောင်းအမှတ်အသားလယ်ကွင်းပိုမိုလုံခြုံကုန်သွယ်များအတွက်အချို့ငွေကြေးတို့အတွက်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော XEM များအတွက် XRP နဲ့ Message များအတွက်ကံကြမ္မာ Tag ကိုပါဝင်သည်။ အမြဲတမ်းကဤသင်သည်သင်၏သိုက်အစပျိုးအခါတိုင်းပါဝင်သည်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ကဖောက်သည် support ကိုဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါရန်ပုံငွေများကိုမကြာမီရလိမ့်မယ် HitBTC အရာပြီးနောက်ဆိုင်းငံ့ထားသောငွေပေးငွေယူသင့်အကောင့်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါရန်ပုံငွေများကိုမကြာမီပြီးနောက်အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။
အဆိုပါ HitBTC ဆုတ်ခွာ option ကိုအကောင့် tab မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာရှိတိုင်းငွေကြေးများအတွက် button ကိုတပ်ဆင်ထားကြောင်းဆုတ်ခွာကော်လံဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကုန်သွယ်အကောင့်မှလွှဲပြောင်းဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒင်္ဂါးပြားကိုသာအဓိကအကောင့်မှထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ယူဆရဥစ္စာ, ရုပ်သိမ်းပေးရန်နှင့်ကောငျးစှာအဆိုပါလက်ခံရရှိလိပ်စာပေါ်မှာ paste လုပ်ပါပမာဏကိုသို့မဟုတ်အရေအတွက်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ပါ။ ငွေသွင်းငွေထုတ်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကနှစ်ချက်စစ်ဆေးသေချာပါစေ။ တစ်ဦးကမပို့ငွေပေးငွေယူအချို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်သတင်းအချက်အလက်များပိုမိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်နှင့်သင်ကအကြောင်းအလွန်သတိထားပါရန်လိုအပ်သည်။
ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီစိတ်ထဲတွင်ဤလိုအပ်ချက်များကိုအချို့ထားပါ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့မဆိုငွေထုတ်မချခင်ထုတ်ယူဘို့နှစ်ခု-Factor authentication ကို enable ။
ရုပ်သိမ်းပေးရန်ရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက်သင်၏အစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းကုဒ်ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ သင်ရုပ်သိမ်းရေးကိုအတည်ပြုရန်သင့်အီးမေးလ်ကိုသုံးပါရမယ်လို့သင်ကအသိပေးအကြောင်းကြားစာကိုရလိမ့်မယ်။ support@hitbtc.com ကနေမေးလ်တံဆိပ်ကပ်ဆုတ်ခွာတောင်းဆိုချက်အတွက်သင့်အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ သင့်ရဲ့ဆုတ်ခွာတောင်းဆိုမှုကိုအတည်ပြုဖို့ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျအစဉ်အမြဲစစ်ဆေးပေးချေမှုသမိုင်းအောက်ရှိအစီရင်ခံစာများ tab မှာထုတ်ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းအအပိုင်းကိုလည်းထုတ်ယူဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသူတို့လုံးဝလုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြကြောင်းပြသသောအစိမ်းရောင်အမှတ်အသားများနှင့်အတူလုပ်ငန်းများ၌နှင့်အခြားသူများလျက်ရှိသည်ကွောငျးဖျောပွထားတဲ့သုံးအဝါရောင်အစက်နှင့်အတူထုတ်ယူအချို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
1 ။ ခရက်ဒစ်ကတ်များ
2 ။ SEPA နှင့် SWIFT ယူရိုလွှဲပြောင်းပါဝင်သည်ကြောင့်ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်း။
သင်အံ့သြဖွယ်ကုန်သွယ် options နဲ့အသုံးပြုသူများမရရှိနိုင် features တွေ၏အားသာချက်ယူရန်အဘို့အသင့်အနေဖြင့်ကုန်သွယ်အကောင့်ထဲမှာရန်ပုံငွေများရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာကုန်သွယ်တဦးတည်းဖို့သင့်အဓိကအကောင့်မှရန်ပုံငွေရွေ့လျားနေဖြင့်ဤသို့ပြုနိုင်ပါတယ်။ ရုံပမာဏကိုလွှဲပြောင်းရန်အကောင့်စာမျက်နှာနှင့် input ကိုအပေါ်နှစ်ခုအကောင့်များအကြားအပြာရောင်မြှားကိုနှိပ်ပါ။
ဒီအကောင့်ထဲမှာဒင်္ဂါးပြားနှင့်အတူ, သငျသညျအမိန့်ကို set up နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအငြိမ့်နဲ့လုံလုံခြုံခြုံရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။ အဆိုပါကုန်သွယ်မျက်နှာပြင်ကိုသင်ကုန်သွယ်အားလုံးအတွက်ရွေးနိုင်သည်ရှိရာလဲလှယ် option ကိုအပေါ်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထရေးဒင်းအားလုံးအတွက်တန်ဆာအပိုင်းကနေဝင်ရောက်နေကြသည်။
အဆိုပါဝယ်ယူရောင်းချ boxes တွေကိုသင်ဖြည့်စွက်ရန်ဆန္ဒရှိအလို့ငှာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ မြင်နိုင်မေးခွန်းများကိုအမှတ်အသားများကျော်လှုပ်ရှားသင်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုစုံစုံအကျဉ်းဖော်ပြချက်ပေးသည်။ Market က, ကန့်သတ်, ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ကန့်သတ်မရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
အပိုဆောင်း features တွေသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်သမိုင်းခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရန်သင့်အား enable လုပ်ဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့သမိုင်းအမိန့်မှာတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ပုဒ်မကုန်သွယ်မှုလိမ့်မည်။ အစီရင်ခံစာများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, စျေးကွက်ကိုဖြတ်ပြီးအရောင်းစီမံခန့်ခွဲဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်။
အစီရင်ခံစာများအပိုင်းမှာတော့, အမိန့်တစ်ခုအမြင်ရှိထားတဲ့အမိန့်ကိုပယ်ဖျက်, ၎င်းတို့၏အပြည့်အဝ status ကိုကြည့်ရှု, ပို့ကုန်ကုန်သွယ်သမိုင်းနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာတခြားအလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်ငါ့အမိန့်ကိုသွားပါ။
တစ်ခုကအမိန့်စာအုပ်စျေးကွက်အတိမ်အနက်ကိုဖေါ်ပြခြင်းသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်, နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်အတွက်သင်ရွေးချယ်ထားသော cryptocurrency များအတွက်စျေးနှုန်းများမှာရရှိနိုင်ပါပြီ။
HitBTC ပလက်ဖောင်းအသစ်အသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်၎င်း၏ Affiliate program နဲ့အသုံးပြုသူများအဆု။ အဆိုပါလဲလှယ် affiliates ပလက်ဖောင်းမှမိမိတို့၏မိတ်ဆွေများကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့စိတ်ကြိုက်လင့်ခ်ပေးထားကြသည်ရှိရာတစ်ဦးလွှဲပြောင်းစနစ်အားအသုံးပြုသည်။ သင့်ရဲ့ဒိုင်လူကြီးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်သူတို့၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအနေဖြင့်ဆုကြေးငွေဆုလာဘ်ရယူပါ။ အပိုဆုကုန်သွယ်စရိတ်၏ 75% သကဲ့သို့မြင့်မားစေနိုင်ပါတယ်။
သင်ဤလွယ်ကူသောလမ်းအတွက်အမြတ်အစွန်းစေနိုင်သည်။ သူတို့ကပင်အများဆုံးဖောက်သည်ကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့ link ကိုခြေရာခံဖို့ affiliates များအတွက် tools များရှိသည်။ အကွိမျမြားစှာလင့်များဖန်တီးအများစုအသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်. အညီအမည်ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလင့်များင်ငွေ, Signup နှင့်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အဘို့အခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ ဆုလာဘ်တစ်ခုအခြို့သောငွေပမာဏမှာဆုတ်ခွာရသည်။
HitBTC ပစ်လွှတ်ပြီးနောက်ပြန် 2015 အတွက် hacking ခံစားခဲ့ရသညျ။ အတွေ့အကြုံဖလှယ်သကဲ့သို့, ပလက်ဖောင်းယခုလုံခြုံရေးယူ
လုံခြုံရေး features ၏တစ်ဦးအမျိုးမျိုးအကောင့်ဆက်တင်များအတွက် log နှင့်ဆုတ်ခွာဖို့လက်လှမ်းများအတွက် 2-Factor ဖော်ထုတ်ခြင်းအပါအဝင် platform ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောရဲ့ login အဖြစ်လှုပ်ရှားမှုသမိုင်းအသုံးပြုသူများပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်သူတို့၏အကောင့်ပွဲ၌ထူးဆန်းတဲ့အိုင်ပီလိပ်စာများမှဝင်ရောက်နေကြသည်ဆိုပါကညညျးညူလုပ်နိုင်သည့်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, select လုပ်ပါ cryptocurrencies အသုံးပြုသူဒင်္ဂါးပြား၏အော့ဖ်လိုင်းသိုလှောင်မှုသုံးစွဲဖို့တစ်ခု option ကိုပေးသောအအေးသိုလှောင်မှုပိုက်ဆံအိတ်ရှိသည်။
ပလက်ဖောင်းအဖြစ်ဝေးသင်ခြိမ်းခြောက်မှုများအဘို့သင့်အကောင့်၏လှုပ်ရှားမှုစစျဆေးနိုငျရာကနေလုံခြုံရေးအ tab ကို featuring အဖြစ်တတ်၏။ အဆိုပါ tab ကိုဖွင့်အများဆုံးအံ့သြဖွယ်များနှင့်ထညျ့ option ကိုအော်တိုကနေ log out option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုသူ့ဟာသူအလိုအလျောက်ထွက်တွင်းသို့ဘယ်လိုမကြာခဏရွေးချယ်ဖို့နိုင်ပါတယ်။
အချိန်ကြားကာလနာရီဝက်ကနေနေသမျှကာလပတ်လုံးတစ်ပါတ်အဖြစ်အထိ။ တစ်ဦး '' ဘယ်တော့မှမ '' option ကိုလည်းရှိပါသည်။ အလိုအလျောက်ကနေ log out အကောင့်တစ်ခု key ကိုလုံခြုံရေး feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ option ကအားလုံးအစည်းအဝေးများအဆုံးသတ်ခြင်းနှင့်အလိုအလျှောက်သင် action ကိုဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုနေသည်တ မှလွဲ. အားလုံးတက်ကြွစွာအစည်းအဝေးများကနေ log out ပါလိမ့်မယ်။
အများအပြားကလုံခြုံရေးအကြံပြုချက်များသူတို့၏အကောင့်များအတွက်အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးအစီအမံအပေါ်သုံးစွဲသူများကအကြံပေးဤအပိုင်းတွင်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ပါကဤလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုအသင်းနှင့်အတူတိုင်တန်း၏အမှု၌ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်: အွန်လိုင်းထောက်ခံမှုသဏ္ဍာန်တိုက်ရိုက်ချက်တင်မိသားစုအီးမေးလ်: support@hitbtc.com
သုံးပြီးထရေးဒင်း cryptocurrencies နှင့်ဆက်စပ်ပိုင်ဆိုင်မှု HitBTC ပလက်ဖောင်းမြောက်မြားစွာအားသာချက်များရှိသည်။ အဲဒါတွေကဘာလဲ?
၏•အမြင့်ငွေဖြစ်လွယ် HitBTC အမိန့်များချက်ချင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေကြောင်းပလက်ဖောင်း။
•ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထုတ်ယူနှင့်သိုက်အဖြစ်သို့နှင့်ဤအရောင်းအဖို့မနိမ့်သို့မဟုတ်အထက်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်ကြသည်မဟုတ်။ Fiat ထုတ်ယူနှင့်သိုက်အချို့သောအသုံးပြုသူများအတွက်ထောက်ခံနေကြသည်။
•အများအပြားပိုင်ဆိုင်မှု, 150 မှတက်, ဒီစမတ်အပေါ်ကုန်သွယ်နိုင်ပါသည် HitBTC ပလက်ဖောင်း
• Multi-ခြေလှမ်းစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့် encryption ကိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တစ်ဦးအလွန်မြင့်မားသောလုံခြုံရေးအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်
•အဆင့်မြင့် fix API ကိုနှင့် REST API ကိုဖြေရှင်းချက်အလိုအလျောက်ကုန်သွယ် software ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားအဆင့်မြင့်အဆောက်အဦးလျှောက်လွှာ protocols များဖြစ်ကြသည်။
အသုံးပြုသူများအတွက်တိုက်ရိုက် Toolbox ပါဝင်သောတစ်ဦးက Multi-ဘာသာစကားထောက်ခံမှု•။
•ပထဝီကန့်သတ်ပလက်ဖောင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်။ အမေရိကန် clients များ, ဥပမာ, ကိုလက်ခံကြသည်မဟုတ်။
•အသုံးပြုသူများဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပြီ cryptocurrencies ၏ကုန်သွယ် volumes ကိုအတွက်တစ်ဟုန်ထိုးတစ်တည်ငြိမ်တုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်းဖို့မြောက်မြားစွာ site ကိုပျက်ကျ၏ညည်းညူကြသည်။
အဆိုပါ HitBTC ပလက်ဖောင်း cryptocurrency စစ်အစိုးရအဖြစ်နီးပါးကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းနှင့်စတင်ထံမှ cryptocurrency အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ကှကျခဲ့တယျ။ ဒါဟာလဲလှယ်နှင့်အတူပါဆုံးကိစ္စများတွက်ဆခြင်းနှင့်ထုတ်မီးပူဖို့အချိန်အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
ရလဒ်အနေနဲ့ကအလွန်အသုံးဝင်သော features တွေအများကြီးနဲ့အသုံးပြုသူတစ်ဦး -friendly interface ကိုပေါင်းမြောက်မြားစွာကုန်သွယ်အကြံပေးချက်များနဲ့ options ပါရှိပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုမျှသော်လည်းစုံလင်သည်။ ပလက်ဖောင်း, ကံမကောင်းအချို့သောတိုင်ကြားစာနှင့်အသုံးပြုသူများထံမှဝေဖန်မှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကစိစစ်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှေးကွေးနေသေးတယ်ဖြစ်နှင့်ပေးပို့ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာရွက်စာတမ်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နှေးကွေးစေခြင်းငှါစောဒကတက်ကြသည်။
ကြိမ်တွင်လည်းနှေးကွေးအဖြစ်ချေါခဲ့ကြသည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်။ တချို့အွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းလည်းရှည်လျားတုံ့ပြန်မှုအဘို့အနာရီစောင့်ဆိုင်းနှင့်အတူဖောက်သည်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူပြဿနာများကိုညွှန်ပြ။ သငျသညျစိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
HitBTC အသုံးပြုသူအမြင်များရှာကြံနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့၎င်းတို့၏သွင်းအားစုယူပြီးစဉ်အဆက်မပြတ်သူတို့ရဲ့လဲလှယ်ဖို့ခေတ်သစ် cryptocurrencies များအတွက်ထောက်ခံမှုကထပ်ပြောသည်။ အသုံးပြုသူများအတွက်လစဉ်မဲပေးရှေးခယျြစရာကဆက်ပြောသည်နိုင်တိုကင်ရွေးချယ်ဖို့ထုတ်လွှင့်နေကြသည်။ အဆိုပါလဲလှယ်သေချာဘို့လျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ယေဘုယျအား HitBTC တန်ဖိုးရှိမယ့်ရိုက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအလားအလာရကျိုးနပ်သည်မြင့်မားသောငွေဖြစ်လွယ်နဲ့ volume ဝါကြွားခြင်းတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာထူထောင်လဲလှယ်ဖြစ်ခြင်း။ သငျသညျအစတစ်ခု API ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်လာလျှင်ဆက်ဆက်ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အရာအရပ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအကြီးလဲလှယ်။
Tags: hitbtc, hitbtc လဲလှယ်, hitbtc အခကြေးငွေ, HitBTC ပလက်ဖောင်း, hitbtc ပြန်လည်သုံးသပ်, hitbtc လိမ်လည်မှု, sign up ကို hitbtc, HitBTC ကုန်သွယ်, HitBTC ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, hitbtc ဆုတ်ခွာအခကြေးငွေ, hitbtc ဆုတ်ခွာန့်သတ်ချက်, hitbtc အပေါ်ကုန်သွယ်မှုဖို့ဘယ်လို, hitbtc သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို, hitbtc legit ဖြစ်ပါသည်, hitbtc လုံခြုံ, hitbtc ဘယ်မှာတည်ရှိသည်
Bert - ဖေဖော်ဝါရီလ 7, 2019 @ 09: 19
2 နှစ်ပေါင်းဒီနေရာကိုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နှင့်မည်သည့်အဓိကပြဿနာများအမှတ်မထင်ဘယ်တော့မှခဲ့တာ။ သူတို့ရဲ့တွေပေါ်မှာမကောင်းမြင်စိတ်တွေပို့စ်တင်ဤမျှလောက်များစွာသောမုန်းရှိပါတယ်အဘယ်ကြောင့်မသိရပါဘူး။ ဒါဟာနီးပါးငါစီမံခန့်ခွဲစရိတ်တွေနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ရှိရာသာလဲလှယ်င်သကဲ့သို့ငါက၎င်း၏ service ကိုကြိုက်တယ်။
Johns - ဖေဖော်ဝါရီလ 22, 2019 @ 09: 54
အများအားဖြင့်ကဒီမှာအရောင်းအ 5-10 မိအတွက်ကျူးလွန်ပေမယ့်အတည်ပြုချက်ကိုအချိန်ကွန်ယက်ဝန်နှင့်အခကြေးငွေပေါ်မှာမူတည်လျက်ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်အသုံးပြုသူရဲ့ရန်ပုံငွေများကိုကာကွယ်ရန်လုံခြုံရေးအစီအမံများများစွာရှိသေးရဲ့ကြိုက်တယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ကစံဖြစ်ကြပြီးအခြားသူမြားကိုရွေးချယ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငါ 5-6 လကြာအသုံးပြုခဲ့ကြရတယ်ငါသည်ဤပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်။
အများအားဖြင့်ကဒီမှာအရောင်းအ 5-10 မိအတွက်ကျူးလွန်ပေမယ့်အတည်ပြုချက်ကိုအချိန်ကွန်ယက်ဝန်နှင့်အခကြေးငွေပေါ်မှာမူတည်လျက်ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်အသုံးပြုသူရဲ့ရန်ပုံငွေများကိုကာကွယ်ရန်လုံခြုံရေးအစီအမံများများစွာရှိသေးရဲ့ကြိုက်တယ်။ သူတို့ထဲကတချို့ကစံနှင့်အခြားအပေါ်များမှာ
19 - ငါးခု =